Group-ka B ee Copa America oo la soo gabagabeeyey & Xulka Argentina oo soo baxay …+ SAWIRRO – Gool FM
Group-ka B ee Copa America oo la soo gabagabeeyey & Xulka Argentina oo soo baxay …+ SAWIRRO
(Brazil) 23 Juunyo 2019. Waxaa caawa la soo gabagabeeyey Group-ka B ee Copa America, iyadoo xulka Argentina uu xaqiijiyey inuu u soo baxay siddeed dhammaadka.
Argentina ayaa 2-0 uga adkaatay xulka lagu marti qaaday tartankan ee Qatar, waxaana goolka hore oo ahaa mid deg deg ah u dhaliyey 4’daqiiqo Lautaro Martinez, kaddib markii ay ka faa’iideysteen qaladaad ay sameeyeen difaaca Qatar, taas ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ciyaarta ku hoggaaminaysay Argentina.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta xulka Argentina ayaa goolka labaad la yimid waxaana Qatar quusiyey 82’daqiiqo Sergio Aguero, kaddib caawin uu ka helay Paulo Dybala, kulanka ayaana ku soo dhammaaday 2-0 ay ku adkaadeen Lionel Messi iyo xulkiisa Argentina.
Argentina ayaa kaalinta labaad kaga soo baxay Guruubkan B ee Copa America iyagoo leh 4-dhibcood.
Dhinaca kale Colombia ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay Guruubkan B kaddib guul kale oo ay caawa ka gaareen Paraguay.
Wiilasha Colombia ayaa 1-0 uga adkaaday Paraguay, waxaana goolka qura oo ay ku badiyeen u dhaliyey Gustavo Cuellar qeybtii hore ee ciyaarta.
Guushaan ayaa uga dhigan Colombia inay ahayd middoodii saddexaad oo xiriir ah ee ay gaaraan iyagoo 9-dhibcood oo saafi ah kaalinta koowaad kaga soo baxay Guruubkan B.
Colombia iyo Argentina ayaana u gudbay wareegga siddeed dhammaadka Copa America 2019.
Xulka Gabdhaha France oo iska xaadiriyey siddeed dhammaadka Koobka Adduunka ee Dumarka kaddib markii ay garaaceen Brazil … + SAWIRRO